आइतबार सेप्टेम्बर 12, 2021 |
आइतबार सेप्टेम्बर 12, 2021
विषय — विषय- पदार्थ
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: हितोपदेश3: 9
“"तिम्रो सम्पत्तिले परमप्रभुको आदर गर। तिम्रो सर्वोतमबाट परमप्रभुलाई चढाऊ।"”
उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 37: 3, 4, 16, 18, 26, 29
16 दुष्ट मानिसहरूको एकदम घूइँचोभन्दा, कम्ती धार्मिक मानिसहरू नै उत्तम हुन्छन्।
18 परमप्रभुले निर्दोष मानिसहरूलाई जीवनभरि रक्षा गर्नुहुन्छ, तिनीहरूको पुरस्कार सदा-सर्वदाका निम्ति हुनेछ।
26 धार्मिक मानिसहरूले उदारतापूर्वक अरूलाई दिन्छन् अनि धार्मिक मानिसहरूका नानीहरू परमप्रभुका आशीर्वाद हुन्।
29 धार्मिक मानिसहरूले परमप्रभुको वचन अनुसारको देश पाउनेछन्। तिनीहरू त्यहाँ सदा-सर्वदा बस्ने छन्।
1. यर्मिया 9: 23, 24
24 तर यदि कसैले गर्व भने, उसले यस विषयमा गर्व गरोस्। म परमप्रभुलाई चिन्छु र जान्दछु र उहाँ नै परमप्रभु हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीमा न्याय, दया र र्धमिकताको व्यवहार गर्नुहुन्छ। किनभने म यी कुराहरूमा नै आनन्द लिन्छु।
2. उत्पत्ति 13 : 1 (अब्राम), 2, 5-12, 14-18
1 अब्रामले उसकी पत्नी, भतिजो लूत अनि तिनीसंग भएका अन्य सबै वस्तुहरू लिएर नेगेब हुँदै मिश्र देश छोडे।
2 यस समय अब्राम निकै धनी थिए कारण तिनीसँग घेरै गाई-वस्तु र घेरै सुन-चाँदीहरू थिए।
5 त्यस समयमा लूत पनि अब्रामसित यात्रा गरिरहेको थियो अनि तिनीसंग पनि पशुहरू र पालहरू धेरै नै थिए।
6 अब्राम र लूतसित यति धेरै पशुहरू र सरसमानहरू भएकाले जग्गाको अभावले तिनीहरूलाई एकैठाउँ संगै बस्न असम्भव भयो।
7 त्यसै समयमा त्यस भूमिमा कनानी परिज्जी मानिसहरू पनि बस्थे। अब्राम र लूतका गोठालाहरू एक-अर्कासंग झगडा गर्न थाले।
8 यसर्थ अब्रामले लूतलाई भने, हामीहरू सबै दाज्यू-भाइहरू हौ, यसर्थ तँ र म अथवा तेरा मानिसहरू र मेरा मानिसहरू भनेर झगडा हुनु हुँदैन।
9 हामी अलग-अलग बसौं र तँ आफ्नो इच्छा अनुसार ठाउँ रोज, यदि तँ देब्रेतिर गइस् भने म दाहिने तिर जानेछु र यदि तँ दाहिनेतिर गइस् भने म देब्रेतिर जानेछु।
10 लूतले भूमि खोजे अनि यर्दन नदीको बेंसीमा चाँहि पानी प्रशस्त भएको पाए। यो परमप्रभुले सदोम र गमोरा ध्वंश पार्नु भन्दा अघिको कुरो हो। त्यस समयमा सोअरपट्टी यर्दनको बेंसी परमप्रभुको बगैंचा जस्तै थियो। यो भूमि मिश्रदेशको झैं राम्रो थियो।
11 यसर्थ लूतले आफू बस्नको निम्ति यही भूमि रोजे र ती दुइ व्यक्तिहरू छुट्टीए अनि लूतले पूर्वतिर यात्रा शुरू गरे।
12 अब्राम कनान भूमिमा रहे भने लूत बेंसीको शहरहरूमाझ बसे। लूत सदोमतिर निकै पर दक्षिणपट्टी गए अनि त्यही आफ्नो पाल बनाए।
13 सदोमका मानिसहरू परमप्रभुको नजरमा अत्यन्तै दुष्ट थिए।
14 लूत गएपछि परमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो, “आफ्नो वरिपरि हेर, उत्तर, दक्षिण पूर्व, पश्चिमतिर हेर।
15 किनभने म तिमीलाई सम्पूर्ण भूमि दिनेछु जो तिम्रो आफ्नो आउँदो पुस्ताकोलागि हुनेछ अनि यो सदाका लागि तिम्रो भूमि हुनेछ।
16 म तिम्रो सन्तानहरूलाई पृथ्वीको धूलो जस्तै गन्न नसकिने बनाउनेछु। जसरी पृथ्वीमा धूलो गन्न सकिंदैन अनि त्यसतै प्रकारले तिम्रो सन्तानहरूलाई गन्न सकिने छैन।
17 यसर्थ अघि बढ, आफ्नो सम्पूर्ण भूमिमा हिंड किनभने मैले यो तँलाईं दिएको छु।”
18 यसरी अब्रामले आफ्नो पालहरू हटाए अनि हेब्रोनमा माम्रे फँलाटका रूखहरु भएकहाँ गए। अब्रामले त्यस ठाउँमा परमप्रभुको आराधना गर्नको लागि एउटा वेदी बनाए।
3. 1 कोरिन्थी3: 6, 7
4.2इतिहास 31 :2(हिजकियाह)-8
5. 1 तिमोथी6: 17-19
6.2कोरिन्थी 9: 6-11
9 धर्म शास्त्रमा यो लेखिएको छःउसले उदारतापूर्वक गरीबहरूलाई दिंदछ उसको दयाभाव सदा-सर्वदा रहिरहन्छ।
पदार्थ त्यो हो जो अनन्त र कलह र क्षय को असमर्थ छ। सत्य, जीवन र प्रेम पदार्थ हो, जसरी धर्मशास्त्र हिब्रू मा यो शब्द को उपयोग गर्दछ: "आशा गरिएका चीजहरुको पदार्थ, नदेखेको चीजहरुको प्रमाण।" आत्मा, मन, आत्मा, वा भगवान को पर्याय, मात्र वास्तविक पदार्थ हो। आध्यात्मिक ब्रह्माण्ड, व्यक्तिगत मानिस सहित, एक मिश्रित विचार हो, आत्मा को दिव्य पदार्थ प्रतिबिम्बित।
जसलाई पदार्थ भनिन्छ त्यो आत्मा को लागी अज्ञात छ, जो आफै मा सबै पदार्थ समावेश गर्दछ र अनन्त जीवन हो।
सबै कि हामी पाप, रोग, र मृत्यु शब्द एक नश्वर विश्वास हो। हामी त्रुटि को रूप मा मामला परिभाषित, यो जीवन, पदार्थ, र खुफिया को विपरीत छ किनभने। पदार्थ, यसको मृत्युदर संग, पर्याप्त हुन सक्दैन यदि आत्मा पर्याप्त र अनन्त छ। कुन हाम्रा लागि पदार्थ बन्नुपर्छ, - गल्ती गर्ने, परिवर्तन गर्ने, र मर्ने, परिवर्तनशील र नश्वर, वा अचल, अपरिवर्तनीय, र अमर?
भौतिक इन्द्रियहरु द्वारा ज्ञात वस्तुहरु पदार्थ को वास्तविकता छैन। तिनीहरू केवल के हुन् नश्वर विश्वासले उनीहरुलाई बोलाउँछ। पदार्थ, पाप, र मृत्युदरले सबै मानीस चेतना गुमाउँछ वा जीवन वा अस्तित्व को लागी दावी गर्दछ, किनकि नश्वरले जीवन, पदार्थ, र बुद्धिमत्ता को झूटा भावना छोड्छ। तर आध्यात्मिक, शाश्वत मानिस मृत्युको यी चरणहरु द्वारा छुने छैन।
यो कती साँचो हो कि भौतिक ज्ञान को माध्यम बाट जो सिकेका छन् हराउनु पर्छ किनभने यस्तो तथाकथित ज्ञान विज्ञान मा भएको आध्यात्मिक तथ्यहरु द्वारा उल्टो छ। जुन भौतिक इन्द्रियलाई अमूर्त भनिन्छ त्यो पदार्थ हो। के भौतिक भावना को लागी पदार्थ लाग्दछ, शून्यता बन्छ, जस्तै इन्द्रिय सपना हराउँछ र वास्तविकता देखिन्छ।
ईसाई धर्मले मानिसहरुलाई स्वाभाविक रूप मा पदार्थ बाट आत्मा मा बदल्न को लागी कारण बनाउँछ, फूल अन्धकार बाट उज्यालो मा बदलिन्छ। मानिस तब ती चीजहरुको उपयोग गर्दछ जुन "आँखाले देखेको छैन र कानले सुनेको छैन।" पावल र जोन को एक स्पष्ट आशंका थियो कि, जसरी नश्वर मानिस बलिदान बाट बाहेक कुनै सांसारिक सम्मान प्राप्त गर्दैन, त्यसैले उसले सबै सांसारिकता त्यागेर स्वर्गीय धन प्राप्त गर्नु पर्छ। त्यसोभए उनी संसारको माया, मनसाय, र उद्देश्य संग केहि समान छैन।
6. 252 : 15-23 (लाई.), 31-8
भौतिक भावना को झूटा प्रमाण आत्मा को गवाही संग हड्ताल को विरोधाभास छ। भौतिक भावना वास्तविकता को अहंकार संग आफ्नो आवाज उठाउँछ र भन्छन्:
म पूरै बेइमानी छु, र कुनै मानिसलाई थाहा छैन। म धोका दिन सक्छु, झुट बोल्न सक्छु, व्यभिचार गर्न सक्छु, लुट्न सक्छु, हत्या गर्न सक्छु, र म चिल्लो भाषाको खलनायक द्वारा पत्ता लगाउनबाट बच्न सक्छु। प्रवृत्ति मा जनावर, भावना मा छली, उद्देश्य मा धोखाधड़ी, मेरो जीवन को एक पर्व दिन को छोटो अवधि बनाउन को मतलब।
आत्मा, विपरीत साक्षी बोक्दै, यसो भन्नुभयो:
म आत्मा हुँ। मानिस, जसको इन्द्रिय आध्यात्मिक हो, मेरो समानता हो। उहाँ अनन्त समझ प्रतिबिम्बित गर्नुहुन्छ, किनकि म अनन्त छु। पवित्रताको सुन्दरता, अस्तित्वको पूर्णता, अविनाशी महिमा, - सबै मेरा हुन्, किनकि म भगवान हुँ। म मानिसलाई अमरत्व दिन्छु, किनकि म सत्य हुँ। मँ समावेश गर्दछु र सबै आनन्द प्रदान गर्दछु, मँ माया हुँ। म जीवन दिन्छु, बिना शुरु र अन्त बिना, मँ जीवन हुँ। म सर्वोच्च हुँ र सबै दिन्छु, किनकि म मन हुँ। म सबैको पदार्थ हुँ, किनकि म त्यो हुँ।
कसले, कि जीवन, पदार्थ, र बुद्धि मा भगवान बाट अलग बुद्धि मा खतरनाक विश्वासहरु लाई महसुस गरेको छ, विश्वास को कुनै त्रुटि छैन भन्न सक्छ? पशु चुम्बकत्व को दावी जान्दै, कि सबै दुष्ट जीवन, पदार्थ, र पदार्थ, बिजुली, पशु प्रकृति, र जैविक जीवन मा खुफिया को विश्वास मा जोड्दछ, कसले इन्कार गर्दछ कि यी त्रुटिहरु हुन् जो सत्य हुनु पर्छ र विनाश हुनेछ? क्रिश्चियन वैज्ञानिकहरु भौतिक संसार बाट बाहिर आउन र अलग हुन प्रेरित आदेश को लगातार दबाब मा बाँच्नै पर्छ।
धन, प्रसिद्धि, र सामाजिक संगठनहरु, जो भगवान को सन्तुलन मा एक जोट तौल छैन, र हामी सिद्धान्त को स्पष्ट विचारहरु लाई टाढा लैजानुहोस्। गुटहरु तोड्नुहोस्, ईमानदारी संग स्तर को धन, लायक ज्ञान को अनुसार न्याय गर्न को लागी दिनुहोस्, र हामी मानवता को राम्रो विचार प्राप्त गर्दछौं।
हाम्रो प्रगति को पक्का गर्न को लागी, हामी जान्दछौं कि हाम्रो माया कहाँ राखिएको छ र जसलाई हामी स्वीकार गर्छौं र भगवान को रूप मा मान्दछौं। यदि ईश्वरीय प्रेम हाम्रो नजिक, प्रिय, र अधिक वास्तविक हुँदैछ, कुरा तब आत्मा को अधीनमा छ। बस्तुहरु हामी पछ्याउने र आत्मा हामी प्रकट हाम्रो दृष्टिकोण देखाउन र हामी के जितिरहेका छौं देखाउन।
आत्मा मा धनी गरीबहरु लाई एक भव्य भाईचारा मा मद्दत, सबै एकै सिद्धान्त, वा बुबा भएको; र धन्य हो त्यो मानिस जो आफ्नो भाइ को आवश्यकता देखी र यो आपूर्ति, अरुको भलाइ मा आफ्नो आफ्नै खोज्दै। प्रेम कम से कम आध्यात्मिक विचार, अमरता, र भलाइ को लागी दिन्छ, जो सबै को माध्यम बाट चमक जस्तै कली को माध्यम बाट चम्किन्छ।
यदि शिष्य आध्यात्मिक रूप मा अगाडी बढिरहेको छ, उहाँ भित्र पस्न को लागी प्रयास गरीरहनु भएको छ। ऊ निरन्तर भौतिक भावना बाट टाढा जान्छ, र आत्मा को अविनाशी चीजहरु तिर हेर्छ। यदि ईमानदार हुनुहुन्छ भने, उहाँ शुरुवात बाट बयाना हुनुहुनेछ, र प्रत्येक दिन सही दिशा मा थोरै कमाउनुहुनेछ, जब सम्म उसले खुशी संग आफ्नो पाठ्यक्रम समाप्त गर्दछ।